२०१ of को सर्वश्रेष्ठ फोनहरू
मुख्य समाचार र समीक्षा २०१ of को सर्वश्रेष्ठ फोनहरू
२०१ of को सर्वश्रेष्ठ फोनहरू
२०१ of को सर्वश्रेष्ठ फोनहरू के हुन्?
२०१ 2017 को नजिक आउने बित्तिकै, यो बर्षको सबै भन्दा राम्रो Android फोनहरू र नयाँ आईफोन मोडेलहरूमा एक पटक हेर्नका लागि समय छ। यो लामो समयमा मोबाइल टेकको लागि सबै घटनाहरू मध्ये एक हो, तर २०१ 2017 मा स्मार्टफोनको विश्वलाई आकार दिन दुई प्रमुख नयाँ प्रचलनहरू थिए:
किनारा-देखि-किनारा, बेजेल-कम पर्दा
यस वर्ष लगभग सबै नयाँ उपकरणहरूले यी दुई प्रवृत्तिलाई पछ्याए, र तिनीहरू गत वर्ष सुधार गरियो नयाँ डुअल क्यामेरा सेटअप र मेशिन शिक्षा सुविधाहरू। सन् २०१ 2017 मा राम्रो अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाऔं।
त्यहाँ कुनै एक आकारको फिट-सबै फोन छैन, हामी सबै राम्रो नयाँ फोनहरू हेर्छौं जुन तपाईंले विचार गर्नुपर्नेछ। यहाँ तिनीहरूको पेशेवर पक्ष र विपक्षहरू छन्:
एप्पल आईफोन एक्स, आईफोन and र आईफोन Plus प्लस
राम्रो प्रदर्शन, उत्कृष्ट क्यामेरा, तर मूल्यवान
एप्पलसँग यस वर्ष तीन नयाँ आईफोनहरू छन्। $ १,००० आईफोन एक्स ताजा डिजाइन, एक किनारा-देखि-किनारा स्क्रिन र नयाँ फेस आईडी टेकको साथ फ्ल्यागशिप हो। सबै तीन नयाँ आईफोन्ससँग बिल्कुल उस्तै उस्तै मुख्य क्यामेरा छ, तर Plus प्लस र आईफोन एक्ससँग एक सेकेन्डरी, & apos; टेलि 'क्यामेरा छ जसले तपाईंलाई स्पष्ट झूम लिन र DSLR मा जस्तै धमिलो पृष्ठभूमिको साथ फोटो फोटो खिच्न अनुमति दिन्छ। आईफोन एक्सले यसको अगाडि क्यामेराको साथ धमिलो पृष्ठभूमि भएको पोर्ट्रेट पनि खिच्न सक्छ, जबकि अन्य दुईले सक्दैन। सबै तीन आईफोनहरूमा एक समान प्रदर्शन छ: सबै A11 प्रणाली चिपको साथ आउँदछन्, कुनै पनि फोनको सब भन्दा छिटो।
सबै तीन आईफोनसँग ग्लास ब्याकहरू छन् र क्यूआई वायरलेस चार्जिंग, एक राम्रो नौटंकी समर्थन गर्दछ। बक्समा कुनै पनि वायरलेस चार्जर छैन, यद्यपि। उनीहरूले द्रुत चार्जिंग पनि समर्थन गर्दछन्, जुन राम्रो छ, तर यसको लागि तेस्रो-पार्टी चार्जर पनि चाहिन्छ। मूल्यवान एप्पल सामानको सट्टामा, हामी द्रुत चार्जबाट लाभान्वित गर्नका लागि साधारणa१० को लागि एक साधारण एन्कर पावरपोर्ट २ सिफारिस गर्दछौं।
किन तपाईंले नयाँ आईफोनहरू लिनु पर्छ? तिनीहरू बुट्टरी चिल्लो प्रदर्शन र अनुप्रयोग र खेलहरूको एक धनी ईकोसिस्टमको साथ बाहिर खडा हुन्छन्। साथै, तपाई आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि आईफोन अपडेटको साथ वर्षौंसम्म समर्थित हुनेछ र ती अपडेटहरू एक वर्ष पछि आउँदैनन्। यदि तपाईं प्रदर्शन मूल्य र एक राम्रो क्यामेरा चाहनुहुन्छ तपाईं तिनीहरूलाई किन्न पर्छ। र पक्कै पनि, यदि तपाईंले ती सुपर उच्च मूल्यहरूमा ध्यान दिनुहुन्न। अझै, तिनीहरू शीर्ष दाबीकर्ता हुन्'२०१ 2017 को सर्वश्रेष्ठ फोनहरू'शीर्षक
हाम्रो पढ्नुहोस् आईफोन एक्स समीक्षा यहाँ
हाम्रो पढ्नुहोस् आईफोन Plus प्लस यहाँ समीक्षा
हाम्रो पढ्नुहोस् आईफोन review समीक्षा यहाँ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट 8, ग्यालक्सी S8 र S8 प्लस
सुन्दर गिलास-धातु डिजाइन, उत्कृष्ट क्यामेरा, उत्तम टचविज
सामसुसँग यस वर्ष तीन नयाँ फोनहरू पनि छन्: ग्यालेक्सी नोट flag फ्लगशिप एस पेनको साथ, र त्यस्तै समान ग्यालक्सी एस and र एस Plus प्लस। सम्भवतः २०१ three को सर्वश्रेष्ठ फोनहरू।
उनीहरूले सामसु .को स्टाइलिश गिलास र धातु डिजाइनहरूमा थप परिष्कृत गरे र तिनीहरूलाई पूर्णतामा ल्याए। क्यामेराको गुणस्तर पनि सुधारिएको छ, ब्याट्री जीवन ठोस छ र तीनै फोनमा राम्रा सुपर एमोलेड स्क्रीनहरू छन् जुन कालो कालो र ठूलो कन्ट्रास्टको साथ छ।
तिनीहरू सबै सामसु Exper अनुभव इन्टरफेस (पहिले टचविज भनेर चिनिन्छ) को साथ एन्ड्रोइड चलाउँछन्, र यो पहिले भन्दा राम्रो देखिन्छ। प्रदर्शन ज्यादातर राम्रो छ, तर एकदम राम्रो चिकनी छैन। र द्रुत एन्ड्रोइड अपडेटहरू प्राप्त गर्न अपेक्षा नगर्नुहोस्।
अरू सबैका लागि, नोट तपाईको इच्छा सूचीमा हुनु पर्छ यदि तपाई स्टाइलसको साथ उत्पादक फोन चाहानुहुन्छ (र उच्च मूल्यमा ध्यान नदिनुहोस्)। नोट 8 माध्यमिक, र apos; टेलि क्यामेराको साथ पहिलो सामसु phone फोन पनि हो जुन तपाईं धमिलो पृष्ठभूमिको साथ पोर्ट्रेट र तस्वीर लिनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ग्यालक्सी एस and र ग्यालक्सी एस those + सँग ती दुई फेन्सी सुविधाहरू छैनन्, तर धेरै व्यवस्थापन योग्य मूल्यहरू र एक समान प्रदर्शन छ, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई पैसाको लागि राम्रो मूल्यको रूपमा सिफारिस गर्न सक्छौं।
हाम्रो पढ्नुहोस् सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट review यहाँ समीक्षा
हाम्रो पढ्नुहोस् सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 यहाँ समीक्षा
हाम्रो पढ्नुहोस् सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 + समीक्षा यहाँ
गुगल पिक्सेल २ एक्सएल र पिक्सेल २
एन्ड्रोइडमा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ग्यारेन्टेड अपडेटहरू, उत्तम क्यामेरा
गुगल पहिले भन्दा आफ्नै फोनको बारेमा बढी गम्भीर छ। यसमा २०१ two मा दुई नयाँ फोनहरू छन्: पिक्सेल २ एक्सएल र पिक्सेल २। जब क्यामेराको प्रदर्शनको कुरा आउँदछ, पिक्सेल लाइनअप २०१ 2017 को सर्वश्रेष्ठ फोनका लागि शीर्ष दावेदार हो।
पिक्सेल २ एक्सएलको एक किनारा-देखि-किनारा स्क्रिन छ (धेरै नयाँ फ्ल्यागशिपहरू भन्दा थोरै ठूलो बेजेलको साथ) र थोरै ठूलो ब्याट्री, तर यसले त्यस स्क्रिनको क्वालिटीको साथ केही गम्भीर समस्याबाट पनि ग्रसित छ। यसलाई थोरै तिर झल्काउनुहोस् र यसको रंगहरू धेरै निलो हुन्छन् र ध्यान दिईएको बर्न-इन समस्या एमोलेड स्क्रिनहरूको साथ प्रायः अन्य फोनहरूमा भन्दा छिटो देखिन्छ। पिक्सेल २ यस्तो स्क्रीन समस्याबाट ग्रस्त हुँदैन।
किन तपाईंले २०१ in मा पिक्सेल किन्नु पर्छ? यी दुई फोनले कुनै पनि एन्ड्रोइड फोनको उत्तम प्रदर्शन प्रदान गर्दछ र उनीहरूसँग उत्तम डाईनेमिक क्यामेरा र सुन्दर रंगको साथ फोनमा राखिएको सायद उत्तम क्यामेरा हो। मूल्यहरु प्रतिस्पर्धा को सबै भन्दा थोरै तल छन्। सबै भन्दा राम्रो, पिक्सेल अन्य Android फोन भन्दा लामो प्रासंगिक रहनेछ: ती दिन १ मा एन्ड्रोइड सफ्टवेयर अद्यावधिक प्राप्त ग्यारेन्टी छन्।
हाम्रो पढ्नुहोस् गुगल पिक्सेल २ र पिक्सेल २ एक्सएल यहाँ समीक्षा
अहिलेसम्म LG & apos को सब भन्दा राम्रो फोन
एलजी & apos; सब भन्दा राम्रो फोन, V30, को यसको पूरा दृश्य प्रदर्शनको साथ एक किनारा-देखि-किनारा स्क्रिनको हाम्रो मनपर्ने कार्यान्वयन छ: यसमा निशान छैन, कटआउट्स छैन, कुनै अवरोधहरू छैन। केहि प्रारम्भिक एकाइहरू केहि प्रदर्शन समस्याबाट ग्रस्त थिए, तर ती सबै एकाइहरूलाई असर गर्दैन जस्तो देखिन्छ।
V30 ले राम्रो क्यामेरा फिचर गर्दछ र माध्यमिक, सुपर-वाइड-ए angle्गल क्यामेरा खेलको लागि मात्र फ्ल्यागशिप फोन हो जुन कार्य भिडियो खिच्नका लागि उत्कृष्ट कार्य गर्दछ, उदाहरणका लागि। भिडियोहरूको कुरा गर्दा, V30 ले केही राम्रो उन्नत भिडियो मोडहरू पनि प्रदान गर्दछ जुन उत्साही भिडियोग्राफरहरूले सराहना गर्छन्। योसँग उच्च-गुणवत्ताको अडियो आउटपुट पनि छ। V30 सँग पनि ग्लास पछाडि र कडा धातु फ्रेमको साथ एक धेरै परिष्कृत डिजाइन छ। LG & apos को अनुकूलन Android ईन्टरफेसलाई पालिश चाहिन्छ, तर यो कार्यशील छ र तपाईं यसको विचित्रतामा बन्चित हुनुहुनेछ। तपाईंले V30 मा हेर्नु पर्छ यदि तपाईं चौडा कोणको क्यामेरा, ठूलो अडियो क्वालिटी मान्नुहुन्छ र वरपरका मानिसहरू भन्दा अलि फरक हुन चाहनुहुन्छ भने।
हाम्रो पढ्नुहोस् LG V30 समीक्षा यहाँ
उत्तम सम्झौता, स्टाइलिश डिजाइन, राम्रो देखिने पर्दा
वनप्लस T टी वर्षको सर्वश्रेष्ठ 'बार्गेन फ्ल्यागशिप' फोन हो।
ती सबैको अन्तिममा रिलीज गरियो, यससँग परिष्कृत डिजाइन छ जुन समात्न सहज छ, यसले एक किनार देखि कुना एमोलेड डिस्प्ले देखाउँदछ जुन राम्रो देखिन्छ, र धेरै ठोस ब्याट्री जीवन। हामी पनि सफा एन्ड्रोइड ईन्टरफेस र 5T को प्रदर्शन गति मन पराउछौं। क्यामेरा उत्तमको साथ ठ्याक्कै छैन, तर यो पछाडि पछाडि पनि छैन। र नयाँ फेस अनलक सुविधा आश्चर्यजनक रूपमा काम गर्दछ।
तपाईंले वनप्लस T टी लाई विचार गर्नुपर्छ यदि तपाईं सफ्ट एन्ड्रोइड इन्टरफेस र एक राम्रो, कुनै सम्झौता सम्झौता फोन मनपर्नुहुन्छ भने। नोट गर्नुहोस् कि वनप्लस T टी मात्र अनलकमा बेचिन्छ र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेरिजन वायरलेस र स्प्रिन्ट जस्ता सीडीएमए क्यारियरहरूमा काम गर्दैन।
हाम्रो पढ्नुहोस् वनप्लस T टी समीक्षा यहाँ छ
ठूलो ब्याट्री र कुनै सम्झौता डिजाईनको साथ ठूलो फोन
हुवावे मेट १० प्रो ठूलो फोन हो जुन चिनियाँ कम्पनी हुवावेको ठूलो ब्याट्रीको साथ छ।
म्याटे १० प्रोले एज-टु-एज डिस्प्ले अपनाउँछ, यसमा Huawei-made प्रणाली चिप छ जुन छिटो छ र यसमा छुट्टै मेसिन लर्निंग कोर छ, र योसँग धेरै सक्षम क्यामेरा छ। हामी पनि स्टाइलिश गिलास पछाडि र यस फोनको अलग डिजाईन मन पराउछौं। यसको सबैभन्दा ठूलो खासियत भारी एन्ड्रोइड इन्टरफेस हो जुन Huawei ले प्रयोग गर्छ र त्यो स्टकबाट धेरै फरक छ। यसलाई खरीद गर्नुहोस् यदि तपाईं अझ उत्तम केहि फरक चाहानुहुन्छ। नोट गर्नुहोस् कि मेट १० प्रो संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र अनलकमा बिक्री गरिएको छ।
हाम्रो पढ्नुहोस् हुवावे मेट १० प्रो यहाँ समीक्षा
ग्यालक्सी वाच release रिलिज मिति
s10 अधिक बनाम s20 प्लस
सामसु level स्तर बक्स मिनी समीक्षा
कुन वनप्लस version संस्करण मैले किन्नु पर्छ? मिरर ब्ल्याक vs मिडनाइट ब्ल्याक र सिल्क व्हाइट तुलना
आज उपलब्ध र आउँदै गरेका कोहलका सब भन्दा राम्रा कोहल जाँच गर्नुहोस्
म्याक OS X मा पाइथन Install कसरी स्थापना गर्ने
तपाईंको पीसीबाट आईप्याडमा फाईलहरू स्थानान्तरण गर्न ways तरिकाहरू (२०२१)
सामसु G गियर S2 स्मार्टवाच नानो सिम कार्ड समावेश गर्न अफवाह
जाभामा स्ट्रिंगहरू कसरी तुलना गर्ने
रिपोर्ट: माइक्रोसफ्ट Lumia 950 एटी&T नोभेम्बर २० मा सुरू हुन्छ
सामसु &को उत्कृष्ट ग्यालेक्सी जे फोल्ड २ G जी अचानक आश्चर्यजनक रूपमा कम मूल्यमा बिक्रीमा छ